Imibuzo Evame Ukubuzwa - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Kuthiwani uma ngikhohlwa iphasiwedi yekhamera?
Iphasiwedi ingabuyiswa ngokusebenzisa ithuluzi lethu lokuphatha idivayisi.
Sicela usithinte ngemininingwane sales@viewsheen.com
Izintengo zethu zingashintsha kuye ngokuhlinzekwa nezinye izici zemakethe.Sizokuthumelela uhlu lwamanani olubuyekeziwe ngemuva kokuthi inkampani yakho isithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.Sikunikeza ukwesekwa kwamanani okuncintisana.
Cha, asinalo ubuncane be-oda.
Kungakhathaliseki ukuthi zingaki, sizokunikeza ukwesekwa kobuchwepheshe.
Yebo, singahlinzeka ngemibhalo eminingi ehlanganisa iphrothokholi yezokuxhumana, umbhalo wesakhiwo, umhlahlandlela wokusetshenziswa.
Siqinisekisa ubuchwepheshe bethu, impahla kanye nenqubo yokukhiqiza.Ukuzibophezela kwethu wukwaneliseka kwakho ngemikhiqizo yethu.Ngewaranti noma cha, kuwusiko lwenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izinkinga zamakhasimende ngendlela eyanelisa wonke umuntu.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakishwa kokuthekelisa kwekhwalithi ephezulu.Izimfuneko zokupakishwa kochwepheshe nezingajwayelekile zingase zibize inkokhiso eyengeziwe.
30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yokusondeza ende Ikhamera yezinga lokushisa Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwenethiwekhi Ikhamera yokusondeza enkulu kakhulu imojuli yekhamera yokusondeza